ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय मिडियामा यस्तो हंगामा: ‘बाईबाई दिल्ली, हेलो बेइजिङ’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको ४१ औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछी भारतीय सञ्चार मध्यमहरुमा हंगामा नै मच्चिएको छ।
विभिन्न भारतीय पत्रिकाहरूले आफ्नै खालका विचार र बिश्लेषणहरु धमाधम प्रकाशन गर्न थालेका छन् । यसैबीच भारतको एक ठूलो अंग्रेजी पत्रिका “द न्यु इन्डियन एक्सप्रेस” मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछी नेपालले भारतलाई बाई बाई गर्ने र चिनसँग सम्बन्ध बढाउने भन्दै बिश्लेषण गरेको छ। रामानन्द सेनगुप्ताको बाईलाईनमा शुक्रवार एउटा विश्लेषण आएको छ ।
“द न्यु इन्डियन एक्सप्रेस” का लागि रामानन्द सेनगुप्ताले देखेको उक्त समाचारको हेडलाईनमा भनिएको छ, ‘खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै दिल्लीलाई बाई बाई र बेईजिङ्गलाई स्वागत !’ रामानन्द समाचारमा लेख्छन्, चीननिकट ओलीले सन् २०१५ मा मधेसीहरूले गरेको नाकाबन्दीको लागि भारतलाई दोष दिएका थिए। त्यसैवर्ष ९ महिनामा सरकार गिर्दा पनि भारतको इशारामा भएको भन्दै आरोप लगाउने ओली अहिले पुन प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
ओलीमाथि भारतविरोधी तथा चीनसमर्थक नारा दिएर सत्तामा पुगेका भनि उनले आरोप लगाएका छन्। ओलीले सन् २०१५ (२००७२ साल) मधेसीहरुले लगाएको नाकाबन्दीका बेलामा पाएको सबै पिडा र दुःखका लागि भारतलाई दोषी मान्छन् । यस्तो अवस्थामा ओली भारतप्रति लचिलो हुने अवस्था छैन। अर्को कुरा ओलीले एक्कासी भारतलाई अँगालेमा उनको राजनीतिक आत्महत्या हुने र त्यो ओलीले गर्ने नसक्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
यो समाचार तयार पार्दा रामानन्दले नेपाली राजनीतिक विश्लेषक युवराज घिमिरेसँग अबको ओली र भारत सम्बन्धबारे कुरा गर्दा घिमिरेले ओलीले देखिनेगरी चीनसँग निकटता बढाएकोले भारत स्वाभाविक रूपमा चिन्तित भएको र भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिशोधस्वरूप ओली चीनसँग नजिकिएको बताएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।’
समाचारमा अर्का नेपाली पत्रकारलाई पनि यसबारे सोधिएको र उनले सिधै काठमाडौंको कुरा गर्दा अब बाईबाई दिल्ली, हेलो बेइजिङ हो । यसलाई स्वीकार्नुस् ।’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएको बताईएको छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन ०४, २०७४१३:४७
१९ वर्षीय युवकले गोलि चलाउदा १७ जनाको मृत्यु!
उमेरनै नपुगेका किशोरले गरे १३ वर्षीय किशोरीको सामूहिक बलात्कार ! धम्कि दिन बनाए भिडियो पनि !
अपडेटः विश्वकै सवैभन्दा वृद्ध मासानो नोनाकाको ११३ बर्षको उमेरमा निधन !
प्रचण्डले वाम गठबन्धनको भविष्यबारे गरे यस्तो कडा टिप्पणी